LEGO သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူထားသောအဖွဲ့များစွာကိုအတည်ပြုသည်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 607 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10267 Gingerbread အိမ်, 10275 Elf ကလပ်အိမ်, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး, Creator Expert, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, LEGO.com, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Star Wars, Stranger Things, အဆိုပါ LEGO Group, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှု
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏မကြာမီအနားယူတော့မည့်စာမျက်နှာသို့အစုံဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် LEGO.comအပါအဝင် themes များဖြတ်ပြီး Star Wars, Creator Expert, ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Stranger Things.
အသစ်ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များသည်များစွာအတည်ပြုသည် Brick Fanatics'စာရင်း of Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူခြင်းအပါအ ၀ င်ပြင်းထန်သော hitters များအပါအ ၀ င် 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး, ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် နှင့် 75275 A- တောင်ပံ Starfighter.
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် p ကုမ္ပဏီ၏အကြီးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစုအဖွဲ့အချို့ကိုဖမ်းဆုပ်ရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ p ဖြစ်သည်art ၂၀၁၉ ကဲ့သို့ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစုဆောင်းမှုများ 10267 Gingerbread အိမ်မရ။ ဒီပွဲလမ်းသဘင်ပုံစံကိုတွဲပြီးရောင်းနေတုန်းပါ 10275 Elf ကလပ်အိမ် (နှင့်၊ မကြာမီ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှုဒါပေမယ့် ၂၀၂၂ မှာ Winter Village line-up ကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် 2019 modular building ကိုမင်းရဲ့စာရင်းထဲမထည့်ရသေးရင်မင်းရဲ့စာရင်းမှာထိပ်ဆုံးကရှိသင့်တယ် Lego cityမရ။ Modular Buildings Collection ရှိအခြား set များကဲ့သို့၎င်းသည် aftermarket တွင်တန်ဖိုးမြင့်တက်ရန်လက်တွေ့အားဖြင့်အာမခံသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်တတ်နိုင်သမျှလက်လီလက်ကားယူပါ။
ကူးခေါင်း LEGO.com ချက်ကြိုးပေါ်ရှိလက်ရှိအတည်ပြုထားသောအစုံ ၆၃ လုံးကိုရှာရန် 'မကြာမီအနားယူပါ' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီ၏ပိုပြည့်စုံသောပုံအတွက် Lego dep သတ်မှတ်ပါartယခုနှစ်၏အစစ်အမှန်နှင့်အတုနှစ်မျိုးစလုံးကိုစတိုးဆိုင်စင်ပေါ်တွင် တင်၍ ကစားပါ ဗီဒီယို အထက်၊ ဒါမှမဟုတ် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရန်
← Lego Marvel 76200 Bro Thor ၏ New Asgard ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးနောက်တွဲယာဉ် MarvelHawkeye ၏အနာဂတ်အလားအလာသေးငယ်သောပုံကိုပြသည် →